Onye na-eme China Brush Machine | MeiXin ahịhịa
Anyị na-ejere gị ozi
Trust tụkwasịrị anyị obi, igwe Meixin ọkachamara na-arụ ọrụ.
Ebumnuche anyị bụ ka afọ ju ndị ahịa anyị afọ ojuju na njiri mara nke ọma iji hụ na ndị ahịa niile nwere ike nwee ahụ iru ala ma nwee ntụkwasị obi na ngwongwo anyị na ngwa ha. Ha nwere ọtụtụ atụmatụ na-enye mgbasawanye na itinye ngwa.
3 Axis Hockey ahịhịa na-eme igwe
Ngwunye FMX na-enye ohere ngbanwe ngwa ngwa maka mmepụta ohuru ohuru.
4 Igwe eji eji igwe eji agba ahihia mebiri emebi
N'iji otu isi na-emegharị onwe, anọ na-agagharị onwe anọ, ọ na-eji obere ahịhịa mposi gburugburu, ndị ọzọ.
2 Ngwunye azụ nke Axe
Akwa uwe iji otu nkuzi, onwe abụọ abụọ na - emegharị onwe ya, ọ na - eji ya maka igwe eji arụ ọrụ naanị.
5 Axis na 1 Tufting ahịhịa ahịhịa
kacha mma 5 axis 3 isi 2 igwe na mmiri na 1tu ahịhịa ahịhịa ahịhịa mposi.
Ọrụ mmezi maka azụmahịa achọrọ ma ọ bụ ihe ịma aka siri ike.
Anyị ga-egosi dị ka ndị ahịa anyị si kee igwe .we ga --eme ụdị brooms dị iche iche. Ogo ọkọlọtọ ọkọlọtọ: 400 * 60mm. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịme nha buru ibu ma ọ bụ ụfọdụ brooms pụrụ iche, anyị ga-achọ ịme ya.
Karịsịa, maka akwa igwe
& diski ahịhịa igwe, ụdị ahịhịa a na - ejikarị ya na ụlọ ọrụ maka igwe igwe dị iche na igwe dịgasị iche. nke ahụ bụ otu n'ime ihe kpatara ya chọrọ ịhazi ya.
1. Nchọpụta: Ndị ahịa na-agwa ihe achọrọ na ntinye.
2. Imewe: Otu ndị ọrụ aka na-etinye aka na mbido ọrụ iji hụ na ngwaahịa kachasị mma emebere iji gboo mkpa ndị ahịa.
3. Njikwa Mma: Iji nye ngwaahịa dị elu, anyị na-arụ ọrụ nke ọma& sistemu njikwa njikwa ike.
4. Mmepụta Mass: Ozugbo emere nkwado ihe maka imepụta ya n'ụdị ụdị, ọrụ yana ihe achọrọ, mmepụta bụ usoro ọzọ.
5. Anyị nwere ike ịhazi ụgbọ njem maka iwu - ma ọ bụ site na ọrụ onwe anyị, ndị na - eweta ndị ọzọ ma ọ bụ nchikota ha abụọ.
Anyị na-emikpu n'ime ụwa nke ndị ahịa anyị. Mana anyị agaghị dị egwu mmiri ụfọdụ akọwapụtara mpaghara ahụ; anyị na-enyochakwa ajụjụ ndị dị ka: "Gịnị na-eme ndị ahịa ndị ahịa obi ụtọ?" "Kedụ ka anyị ga-esi mee ka azụmaahịa na-azụ ahịa njedebe?" Nke a bụ ihe anyị ga-eme gị. Nke a bụ otu anyị si eme ka ọrụ gị bụrụ ọrụ anyị.
Anyị emerila ọtụtụ asambodo maka ngwaahịa anyị n'ihe gbasara ịdị mma
N'ime afọ ole na ole gara aga, ihe anyị na-ebute mbụ bụ ọrụ ndị ahịa na ndị ahịa afọ ojuju. Anyị emeela ọtụtụ ihe iji bulie ọkwa dị mma ma gbalịsie ike iji guzobe usoro njikwa na njikwa mara mma. Ọzọkwa, ụlọ ọrụ anyị enwetala ngwaahịa asambodo patent na asambodo CE.